स्प्रिडशिटहरूका लागि गणना सेटिङ परिभाषित गर्दछ।स्प्रिेडसिटको व्यवहारलाई अवधारणात्मक सन्दर्भहरू, मिति सेटिङहरू, दशमलव स्थानहरूको संख्या, र पानाहरू भित्र खोजी गर्दा पूंजीकरण वा कम घटनाहरू विचार गरिनुपर्दछ।
यो चयनमा तपाईँंले पुनरावृत्तिक गणनाहरूको अवधीमा बाहिर ल्याईएका निकटतम चरणहरूको सङ्ख्या सिमांकन गर्न सक्नुहुन्छ। यसको अतिरिक्त, तपाईँंले जवाफको सुक्ष्मताको डिग्री निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
पुनरावृति सन्दर्भहरू संगको सूत्रहरू (समस्या समाधान नहुँदासम्म निरन्तर दोहोरियका सूत्रहरू) निश्चित दोहोर्याईहरू पछि गणना गरिन्छन भन्ने कुरा वर्णन गर्दछ। यदि पुनरावृतिहरू बाकस चिनो नगरिएमा, तालिकामा एउटा पुनरावृत्तिक सन्दर्भले एउटा त्रुटि सन्देश गराउनेछ।
उदाहरण: मुल्य-थप गरिएको- कर बाहेक एउटा चीजको लागत गणना गर्दा।
कक्ष A5 मा 'बिक्रय मुल्य' पाठ, A6 मा 'नेट' पाठ , र A7 मा 'मुल्य-थप गरिएको कर' पाठ टाइप गर्नुहोस।
अहिले कक्ष B5 मा बिक्रय मुल्य(उदाहरणको लागी,१००) टाइप गर्नुहोस। नेट मुल्य कक्ष B6 मा देखाईनु पर्छ र कक्ष B7 मा मुल्य -थप गरिएको कर देखाईनु पर्दछ।
तपाईँलाई थाहा छ कि मूल्य-अभिवृद्धि कर 'net price times 15%' को रुपमा गणना गरिएको छ र तपाईँ बिक्रय मूल्यबाट मूल्य-अभिवृद्धि कर घटाएर खुद मूल्यमा पुग्नु भयो । खुद मूल्य गणना गर्न B6 मा =B5-B7 सूत्र टाइप गर्नुहोस्, र कक्ष B7 मा मूल्य अभिवृद्धि कर गणना गर्न =B6*0.15 सूत्र टाइप गर्नुहोस् ।
सूत्रहरू ठीक सँग गणना गर्नलाई पुनरावृतिहरू सुरु गर्नुहोस् , अन्यथा वस्तुस्थितिपट्टीमा एउटा 'वृताकार सन्दर्भ' त्रुटि सन्देश देखा पर्दछ।
पुनरावृती चरणहरूको अधिकतम सङ्ख्या सेट गर्दछ।
दुई पनरावृति चरण परिणामहरू बीच भिन्नता वर्णन गर्दछ। यदि पुनरावृत्तिको परिणाम न्यूनतम परिवर्तन मान भन्दा कम भएमा,त्यसपछि पुनरावृती रोकिनेछ।
दिनहरूबाट सङ्ख्याहरू सम्म आन्तरिक रूपान्तरका लागि सुरु मिति चयन गर्नुहोस।
१२/३०/१८९९ शून्य दिनको रूपमा सेट गर्दछ।
०१/०१/१९०० (StarCalc 1.0)
१/१/१९०० शून्य दिनको रूपमा सेट गर्दछ। यो सेटिङ डेटा प्रविष्टि सम्मिलित StarCalc 1.0 स्प्रेडसिटहरूका लागि सेट गर्दछ।
०१/०१/१९०४ शून्य दिनको रूपमा सेट गर्दछ।यो सेटिङ फरेन ढाँचामा आयात गरिएको स्प्रेडसिटहरूका लागि प्रयोग गर्नुहोस।
कक्ष सामग्रीहरू तुलना गरेको बेलामा पाठमा ठुलो बर्ण र सानो बर्णको बीचमा छुट्याउनु पर्छ कि भन्ने कुरा वर्णन गर्दछ।
उदाहरण: पाठ 'Test' लाई A1 मा टाइप गर्नुहोस; 'test' पाठ B1 मा टाइप गर्नुहोस। त्यसपछि सूत्र "=A1=B1" लाई C1 मा टाइप गर्नुहोस। यदि केस सम्वेदनशील बाकस चिनो गरिएमा, FALSE कक्षमा देखापर्नेछ; अन्यथा, कक्षमा TRUE देखा पर्नेछ।
EXACT पाठ कार्य सधै केस-संवेदनशिल हो,यो संवादमा सेटिङहरूको स्वतन्त्र।
देखाइएको जस्तै निश्चितता
पानामा प्रदर्शित परिक्रमित मानहरू प्रयोग गरेर गणन गर्ने कि भन्ने कुरा वर्णन गर्दछ।चित्रपटहरू प्रदर्शित मानहरू सँग देखाइनेछन। यदि देखाईए जस्तै निश्चितता विकल्प चिनो नगरिएमा, प्रदर्शित सङ्ख्याहरू परिक्रमित हुन्छन, तर तिनीहरू अ-परिक्रमित सङ्ख्या प्रयोग गरेरे आन्तरिक तरीकाले गणना गरिन्छन।
खोज मापदण्ड = र <> सबै कक्षहरूमा लागू गर्ने पर्छ
.* निम्न अवस्थामा:
win फेला पार्दछ, तर win95, os2win, or upwind फेला पार्देन
win फेला पार्दछ, तर win95, os2win, वा upwind फेला पार्देन
win र os2win फेला पार्दछ, तर win95 वा upwind फेला पार्देन
win , os2win, win95 र upwind फेला पार्दछ
If Search criteria = and <> सबै कक्षहरू लागू गर्नु पर्दछ सक्षम पारिएको छैन भने, "win" बान्कि कार्यहरू जस्तै खोज्नुहोस".*win.*". जब क्याल्क डाटाबेस प्रकार्यहरू सहित खोज गर्दा कक्ष बिना कुनै अवस्थामा बान्कि खोज गर्न सक्नुहुन्छ.
सूत्रहरूमा नियमित अभीव्यक्तिहरू सक्षम पार्नुहोस
स्तम्भ र पङ्क्ति लेबुलहरू स्वचालित तवरले फेला पार्नुहोस्
पाठ तलको स्तम्भ वा पाठको दायाँ तिर पङ्क्तिका लागि लेबुलको रूपमा कुनै पनि कक्षमा पाठ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा वर्णन गर्दछ। पाठमा कम्तिमा एक शव्द समावेश हुनैपर्छ र कुनै पनि सञ्चालकहरू समावेश हुनुहुँदैन।
उदाहरण: कक्ष E5 पाठ "Europe" समावेश गर्दछ। तल, कक्ष E6 मा, मान १०० र कक्षमा E7 मान २०० छ। यदिस्तम्भ र पङ्क्ति लेबुलहरू स्वचालित तवरले फेला पार्नुहोस बाकस चिनो गरिएमा, तपाईँंले कक्ष A1 मा निम्न सूत्र लेख्न सक्नुहुन्छ: =SUM(Europe)
Title is: गणना गर्नुहोस